ကောင်းခါဌာနေပြည်သူ့စစ် (KDA)က ခိုလုံရွာမှ ပြည်သူ (၃၀)ယောက်အား ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွာ – Palaung Land
ဖမ်းဆီးခြင်းခံရသော ရွာသား(၆)ဦး ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာပြီး ရွာသား(၄)ဦးကျန်
ကွတ်ခိုင်မြို့မန်ဂျတ်ကျေးရွာနှင့် လုံကိန်ကျေးရွာမှ လူငယ်(၁၀)ဦး ပျောက်ဆုံးနေ
မြန်မာ့တပ်မတော် တပ်သား ၂ ဦးမှ အဓမ္မပြုကျင့်မှူဖြင့် ရဲစခန်းတွင် အမှုဖွင့်သော်လည်း ကြန့်ကြာမှုရှိနေ
မြန်မာ့ တပ်မတော် တပ်မ(၁၀၁) တပ်သား(၂)ဦးမှ ဟူးခင်ရွာသူ တစ်ဦးအား အဓမ္မပြုကျင့်
သမ္မတ၏ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ဖြင့် မိုင်းချိုမင်းထွေး လွတ်မြောက်လာ
News, features, and human-interest, culture, education, literature, and entertainment, background of the Palaung people, carton, opinion, and photo gallery.
ကောင်းခါဌာနေပြည်သူ့စစ် (KDA)က ခိုလုံရွာမှ ပြည်သူ (၃၀)ယောက်အား ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွာ
February 27, 2017 February 20, 2019 Palaung Land 991 Views0Comments
၂၀၁၇ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၇ ရက်
ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း၊ ကွတ်ခိုင်မြို့နယ်၊ ခိုလုံကျေးရွာတွင် ၂၀၁၇ခုနှစ်၊ ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၂၂ရက်၊ ညနေပိုင်း အချိန်တွင် ကောင်းခါးဌာနေပြည်သူ့စစ်(KDA) အဖွဲ့မှ ဒေသခံပြည်သူ တအာင်းလူမျိူး(၂၅)ဦး နှင့် လမ်းလုပ်သားဗမာလူမျိူး (၅)ဦး တို့အား ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်ဟု ဒေသခံများပြောပြချက် အရ သိရှိရပါသည်။
ကောင်းခါဌာနေပြည်သူ့စစ် (KDA) ဖမ်းဆီးသွားသည့် လူဦးရေ စားရင်း
၎င်းတွင်မှ လမ်းလုပ်သား ဗမာလူမျိုး(၅)ဦး တို့အား ပြန်လွှတ်ပေးပြီးကြောင်း သတင်းရရှိပြီး တအာင်း လူမျို (၂၅)ဦး တို့အား ယနေ့အချိန်ထိ မည်သူနှင့်မျှ တွေ့ဆုံခွင့်မပေးဘဲ ယခုချိန်ထိ ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင် ထားကြောင်း သိရှိရသည်။ ဖမ်းဆီးခေါ် ဆောင်သွားသည့် အကြောင်းရင်းကိုလဲ မသိရှိရပါ။
ဒေသခံအချို့မှ ကောင်းခါးဌာနေပြည်သူ့စစ် တပ်သားသစ်အဖြစ် ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခြင်း ဖြစ်နိုင်ကြောင်း ထင်ကြေးပေး ပြောဆိုနေ ကြသည်ကိုလည်း ကြားသိခဲ့ရသည်။
ကောင်းခါးဌာနေပြည်သူ့စစ် အဖွဲ့သည် ၁၉၉၁ ခုနှစ်က နဝတအစိုးရနှင့်ငြိမ်းချမ်းရေး ရယူပြီး ၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင် ဌာနေပြည်သူ့စစ် အသွင်ကူးပြောင်းခဲ့ပါသည်။
← တပ်မ ၈၈ မှ ရွာသားတစ်ဦးကို သေနတ်ဖြင့် ရိုက်နှက်
ကွတ်ခိုင်အခြေစိုက် မြန်မာ့တပ်မတော် ပစ်ခက်မှုကြောင့် ရွာတွင်း လက်နက်ကြီးကျရောက် ပေါက်ကွဲပြီး လူနှစ်ဦး ပွဲချင်းပြီး သေဆုံး →
RCSS တပ်ဖွဲ့မှ ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားသော ကျောက်မဲမြို့မှ ရွာသားတစ်ဦး ပြန်လည် လွတ်မြောက်လာ
March 18, 2019 Palaung Land 0
လက်ဖက်ခြံလုပ်သားတစ်ဦး အလုပ်လုပ်နေစဉ် မိုင်းနင်းမိပြီး လက်တဖက်ဆုံးရှုံး
February 9, 2016 Palaung Land 0
တပ်မ(၇၇)မှ မန်တုံမြို့နယ် ဂျုံဂျ ကျေးရွာအတွင်း ငွေကြေးတောင်းခံခြင်း နှင့် ပေါ်တာဆွဲခြင်း
July 20, 2015 Palaung Land 0
November 22, 2011 Palaung Land 0
တအာင်းဒေသရှိ ပျက်သုဉ်းမှုဆီသို့ဦးတည်သော ဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံကိန်းနှင့် ခြံမြေများအဓမ္မသိမ်းပိုက်ခံရခြင်းကြောင့် ဒေသခံမိသားစု (၆၃) ရာခိုင်နှုန်းမှာ လယ်ယာခြံမြေများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများ ဆုံးရံှူးနေခြင်း တအာင်းကျောင်းသားနှင့်လူငယ်များအစည်းအရုံး- TSYO မှ ထုတ်ဝေလိုက်သည့် အစီရင်ခံစာတွင် မြန်မာစစ်အစိုးရနှင့် ၎င်းတို့၏ လက်ဝေခံလုပ်ငန်းရှင်များ အတင်းအဓမ္မသိမ်းပိုက်မှုကြောင့် တောင်သူမိသားစုပေါင်း
Copyright © 2019 TA'ANG STUDENTS AND YOUTH ORGANIZATION. All Rights Reserved. Designed by Mai Soe Zar.